कम्पनीको लापरवाहीले चालीस वर्षसम्म सिँचाइ योजना अलपत्र ! - नेपालबहस
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, सिँचाइ कार्यालयलगायत निकायबाट दुई÷तीन वर्षको अवधिमा बोलपत्र हुने र ठेकेदार बदलिने तर, निर्माणकार्यले गति नलिने गरेपछि योजना अलपत्र परेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “बारेकोट–४ स्थित दह खोलाबाट पानी ल्याएर मैना, पाखा, गैरीगाउँ, साउबाडा, भैलोखान, तोलखान, घाटलगायतका स्थानको २०० हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ गर्ने योजनाको लक्ष्य रहेको थियो ।”
सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले पनि नायकबाडा सिँचाइ योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि हालसम्म रु एक करोड खर्च गरिसकेको भए पनि कामको उपलब्धि देखिएको छैन । डिभिजन कार्यालयले छ किलोमिटर लम्बाइको कुलो रु पाँच करोड ४८ लाख लागतमा निर्माण गरी १२० हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा उक्त सिँचाइ योजनाका लागि रु चार करोड ८८ लाख बजेट माग गरेकामा रु आठ लाख मात्र निकासा आएको प्रमुख साहले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको असारमा निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सिँचाइ योजनामा थप बजेट नआउँदा समस्या भएको उनले बताए । हालसम्म योजनाको १२ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको उहाँले जानकारी दिए ।
Previous articleपर्याप्त नसुत्दा कलेज तहका विद्यार्थीहरुमा मानसिक समस्याको खतरा !
Next articleलुम्बिनी सुन्दरीकरणको काम हुँदै
हावाबाट बिजुली उत्पादन : गाउँ झिलिमिली, स्थानीयवासी खुशी
बाह्रबिसे घटनाबाट राष्ट्रपति भण्डारी मर्माहत